XADGUDUBKA GANACSIGA Bahrain-G
SUNSOUL waxaa la aasaasay 2013, waxaan nahay shirkad xirfadle ah oo ku takhasusay soo saarista alaabada Dayactirka Taayirada Garage iyo adeegga DIY. Kooxdayadu waxay uqaadan Ruuxa Geesinimada si ay ula tartamaan, hal-abuurnimo ugana gudbaan is-u-hoggaansanaanta, u hoggaansamida Qiimaha Horumarinta ee barashada iyo kororka oo kooban.
SUNSOUL SUNSOUL waxay ku saleysan tahay falsafada ganacsiga ee tayada ugu horeysa iyo adeegga ugu sareysa, ka dib hal-abuurnimo joogto ah iyo horumar, kooxdeena ayaa ka soo kordhay Tire Valve, Wheel Weight iyo Tire Repair Patch, oo soo saaray noocyo kala duwan hal abuur Qalabka Dayactirka Taayirada, Gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida, Gawaarida gawaarida iyo adabtarada iyo Qalabka Dayactirka Aaladda iyo Mashiinnada. Kaliya uma madax bannaana kor u qaadista sumadda 'SUNSOUL', laakiin sidoo kale waxaan siinnaa badeecooyin loo habeeyay macaamiisha ODM.
SUNSOUL waxay abuurtaa kobcin faa'iido leh iyada oo loo marayo miisaaniyad ganacsi oo isku dheelitiran si loo xaqiijiyo guul waara. Waxaan ku daba joognaa kaamilnimada iyo heer sare. Shaqaalaha heer sare waa aasaaska guusha shirkadda. Dhaqankeenu wuxuu ku sifoobay adkaysi, hufnaan iyo is qadarin. Waxaan ku dhiirigelinaynaa shaqaalaha inay lahaadaan isla markaana ay isla koraan shirkadda.
SUNSOUL aad ayaan ugu mahadnaqayaa wada shaqeynta dhammaan la-hawlgalayaashayada. Waxaan uga mahadcelineynaa kooxda tabarucaaddooda waxaanan ogaanay qiimaha aan ku leenahay barxaddan. Khibraddeennu ha kuu adeegto. Aan wada shaqeyno si aan u rumeyno riyadeenna.
Waxaan sameynaa oo keennaa noocyo kala duwan oo ah mashiinno lagu farsameeyo birta
Iyada oo tiknoolajiyadeena casriga ah iyo kooxda xirfadleyda ah, si dhakhso leh ayaan u koraynaa.
Qalabka mashiinkeena ayaa badanaa la dhigaa halkan. Aqoon isweydaarsigu waa mid ballaaran oo qaadi kara kumanaan mishiinno waaweyn. Aagga aqoon isweydaarsiga wuxuu ku saabsan yahay 2000 mitir laba jibbaaran.